नवराज बि.क घटनाले देश नै रुदा ! शिशिर भण्डारी यति धेरै पैसा बोकेर कहाँ गए ? (भिडियो हेर्नुस) « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
नवराज बि.क घटनाले देश नै रुदा ! शिशिर भण्डारी यति धेरै पैसा बोकेर कहाँ गए ? (भिडियो हेर्नुस)
यतिबेला रुकुम जाजरकोट घटनाले देशै रोईरहेको छ । नवराज बिक र उनको साथीह्रुको न्यायको लागि धेरैले आवाज उठाईरहेका छन् । धेरैले यस घटनालाई जातिय बिवेदको निर्मम घटनाको रुपमा लिएका छन् भने कतिले किशोर अवस्थाको प्रेमको गलत परिणाम बताईरहेका छन् । उक्त स्थलमा धेरै मिडियाहरु पुगेका छन् र नवराजको न्यायका लागि आवाज उठाईरहेका छन् । तर शिशिर भण्डारी भने अन्य दुखी पिडितहरुको दैलोमा पुगिरहेका छन् ।
यसैबिच शिशिर भण्डारी फेरी चेली भुजेलको कोठामा पुगे । जसको दुवै छोरा अपाँग छन् र उनलाई यतिबेला खाना खान र छोराको उपचार गर्न निकै गाह्रो भैरहेको छ । यसअघि पनि शिशिर चलेीको कोठामा पुगेर खाद्यान्न सहयोग र आर्थिक सहयोग गरेका थिए । यसपाली शिशिर पुगेर २ लाख भन्दा माथिको सहयोग गरे । भिडियो हेर्नुस
नेपाल आइडलकी मेचुले ल्याइन् अत्यन्तै मर्म श्पर्शी गीत ‘मैले के बिगारे’
काठमाडौंँ । गायिका मेचु धिमालको नयाँ गीत ‘मैले के बिगारे’ सार्वजनिक भएको छ । गीतमा
सचिन परियार र रचना रिमालको पहिलो गीत “सेतो कपास” आएको १ घन्टामै भयो भा’ इरल
काठमाडौ । पछिल्लो समयका एकदमै भाईरल र चर्चित बाल गायकको रुपमा परिचिन नाम हो सचिन
चितवनमा फेरी एक पटक अर्को घटना घटेको छ । जुन घटना यतिबेला हाम्रो समाजमा प्राय
प्रमोद खरेलको आवाजमा ‘फुल सम्झेर रोए’ सार्वजनिक
काठमाडौं ः गायक प्रमोद खरेलको आवाजमा ’फुल सम्झेर रोए ’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ।